Warshadda Kaydinta Glass ee Shiinaha oo ay weheliso warshadaha Cork iyo alaab-qeybiyeyaasha | Si wanaagsan
Waxay ka samaysan tahay dhalo sare oo nadiif ah, fududahay in la nadiifiyo, iyo qallafsanaanta sare, iska caabbinta nabaad-guurka iyo geedi socod sarreeya, oo ah mid aad u siman.
Daboollada huurka ah ee qoyaanka-huurka waxay dhawrayaan qoyaanka iyo qoyaanka waxayna ku sii hayaan gudaha waxyaabaha agtooda ah kuwo qalalan oo cusub.
Ku habboon kaydinta iyo keydinta maaddooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin kaydinta, hakadka, xirmooyinka, bariiska, sonkorta, bur, shaah, kafee, caleemo, dhir udgoon, buskud, iwm.
Waxay sidoo kale noqon kartaa hadiyadda ugu fiican ujeeddadaada.
Hadiyad ayaa qofkasta jeclaan doonaa-waa kufiican xaflad kasta iyo sanad-guurad sida Halloween, Christmas, Thanksgiving, iwm.
Weelasha wax lagu keydiyo ee nadiifka ahi waa mid ku filan oo waari kara isticmaalka mudada dheer, waxay keydin doontaa boos kujirta qaboojiyahaaga.
Nabdoonaanta weelka dhaqa, laakiin dhaqida gacmaha ayaa lagula talinayaa.
Waxyaabaha ku saabsan Cork Liid-ga Cimilada
Gogosha-huurka-huurka-huurka-daboolka, fududahay in laga hortago qoyaanka, gacanta lagu nadiifiyo, adkaanta adag, cufnaanta badan.
Ka-hortagga-dillaaca ma fududa in la tarmo, iyo caafimaadka iyo dabiiciga labadaba.
Hore: FIDO Jars
Xiga: Jumladda Kaydinta Dhalada ee Muraayadda Dhalada leh ee Dome Lid
300ML Gawaarida muraayadaha gaagaaban ee Muraayadda Cork Stopper
Kulaab Dhalo Dhalada Dhalada ah oo Lagu Duubo Saxarada
Glass Jikada Kaydinta Cuntada oo ay weheliso Bamxada Lid
Jars Kontroolka Jalalka oo ay wataan Koofiyado Laba-Bilood ah